Fa maninona no milentika i Jakarta? Azavainay aminao ny zava-drehetra | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Milentika i Jakarta
Fantatsika fa ny fiovaovan'ny toetrandro dia iray amin'ireo loza mampidi-doza indrindra manerantany atrehin'ny olombelona amin'ity taonjato ity. Jakarta dia nanjary iray amin'ireo tanàna izay nanomboka nilentika haingana kokoa noho ny tanàna hafa erak'izao tontolo izao. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia tombanana fa ny ampahatelon'ny mponina dia mety ho tototry ny 2050 raha mitohy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina ankehitriny. Noho izany, saika azo antoka fa fantatra Milentika i Jakarta.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro izay misy fiatraikany ratsy amin'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny antony hilentenan'ny Jakarta.
1 Fa maninona no milentika i Jakarta?
3 Milentika any Jakarta ary mety ho fanasitranana
4 Tanàna rendrika
Fa maninona no milentika i Jakarta?
Fantatsika fa ny fiovan'ny toetrandro dia mampiakatra ny salan'isan'ny planeta manontolo noho ny fiakaran'ny maripana. Am-polony taona maro ny fihenan'ny solika sy ny fihoaram-pefy amin'ny famatsian-drano ambanin'ny tany, ary koa ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina sy ny toetr'andro no mahatonga ny faritra amoron-tsiraka hihombo. Hita fa manomboka manjavona ireo faritra maro any atsinanan'i Jakarta noho ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina.
Ataovy ao an-tsaina fa i Jakarta dia miorina amin'ny faritra horohoron-tany misy tany feno heniheny. Ao amin'ity faritra ity Renirano 13 no mihaona amin'ny fihaonana, ka mora tohina ny tany. Tsy maintsy ampianay amin'izany koa ny fisian'ny fivezivezena mafy, mponina marobe ary tsy mahomby ny drafitra an-tanàn-dehibe. Milentika i Jakarta satria tsy manana rafi-drano fantsona any avaratra indrindra, noho izany ny indostria eo an-toerana sy ny mponina an-tapitrisany vitsivitsy manararaotra ireo rano anaty rano.
Amin'ny fitrandrahana ireo rano anaty rano ambanin'ny tany ireo dia efa manana ny sasany amin'ireo vokatra izay nahatonga an'i Jakarta hilentika. Raha esorintsika amin'ny fomba tsy voafehy ny rano ambanin'ny tany dia hiteraka fahaverezan'ny fanohanan'ny tany isika. Ny velaran-tany dia hanome lalana noho ny tsy fisian'ny fanampiana afaka manohana ny lanjany. Noho izany, ny fitrandrahana rano goavambe sy lehibe dia mitarika ny tany hilentika. Mahatonga izany Jakarta dia mahatratra 25 santimetatra isan-taona any amin'ny faritra sasany izay tena marefo. Ireo soatoavina fidinana anaty ireo dia avo roa heny amin'ny salanisan'izao tontolo izao ho an'ny tanàna amoron-dranomasina lehibe.
Sabemos que ny faritra sasany any Jakarta dia manodidina ny 4 metatra ambanin'ny haabon'ny ranomasina. Manova ny tontolo tsy azo ovaina izany ary mamela olona marobe an-tapitrisany iharan'ny loza voajanahary isan-karazany. Raha heverintsika fa ny fiovan'ny toetr'andro dia mampiempo ny glasy amin'ny glacier erak'izao tontolo izao dia hiakatra ny haavon'ny ranomasina mandritra ny taona maro. Arakaraka ny fandehan'ny fotoana no hahitana ny olana bebe kokoa ary hilentika i Jakarta.
Manoloana ny toe-javatra toy izany dia manjary mahazatra ny tondra-drano, indrindra amin'ny vanim-potoana main'ny firenena tropikaly. Tombanan'ireo vinavina ny vokadratsin'ny miharatsy ny tondra-drano rehefa miakatra ny haavon'ny ranomasina noho ny fiakaran'ny hafanan'ny tany. Ny ambanin'ny tany dia mikasika ny haavon'ny ranomasina ary arakaraky ny fisondrotany, no mampitombo ny vokany ary vao mainka mampidi-doza. Tsy hiova ihany ny toekarena, fa hisy ny famindra an-keriny ny mponina any amin'ny faritra afovoan-tany.
Misy faritra any Jakarta nozanahina noho ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina ary nahatonga ny rendrika tany amin'ny faritra sasany tao an-tanàna.
Milentika any Jakarta ary mety ho fanasitranana
Anisan'ireo vahaolana naroso mba hanamaivanana an'io toe-javatra io, mahita ny fankatoavana ny drafitra iray mikendry ny hanangana nosy artifisialy ao amin'ny Bay Bay Jakarta. Ireto nosy ireto dia ho toy ny karazana buffer mifanohitra amin'ny Ranomasina Java ary hampisondrotra ny haavon'ny ranomasina tsy ho tampoka. Naroso ihany koa ny fananganana rindrina amoron-tsiraka midadasika. Na izany aza, amin'ity toe-javatra ity dia tsy misy antoka azo antoka fa novinavinaina ho kasaina hatao ny tetikasa teti-bola mitentina 40 miliara dolara dia afaka mamaha ny olan'ny tanàna milentika.
Fantatsika fa milentika i Jakarta, ary na izany aza dia nahemotra tamin'ny fanemorana taona maro ity tetikasa ity izay hanasarotra ny fananganana. Ny fananganana sakana hampihenana ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina dia efa nosedraina talohan'izay. Nisy rindrina vita amin'ny beton natsangana nanamorona ny morontsiraka tao amin'ny distrikan'i Rasdi sy ny maro hafa izay tandindomin-doza. Na izany aza, ireo rindrina ireo dia efa vaky ary mampiseho mariky ny filentehana. Tsy azo natao ny nanakana ny rano tsy hitsofoka ao ary manomboka mamorona triatra. Mamakivaky ireo rindrina ireo ny rano ary mandena ny ala mikitroka feno arabe sy trano bongo any amin'ireo tanàna mahantra indrindra eto an-tanàna. Izany rehetra izany dia vokatry ny tsy fahampian'ny fahadiovana sy ny teti-bola.
Koa satria tsy nisy fiatraikany firy ny fepetra momba ny tontolo iainana, dia mitady fepetra hafa mahery vaika kokoa ny tompon'andraikitra. Ny fepetra dia tsy maintsy mitady renivohitra vaovao ny firenena. Ny toerana dia azo ambara tsy ho ela, ny azo antoka indrindra dia ny famindrana ny tanàna iray manontolo mankany amin'ny nosy Borneo.
Fanamby iray ny famindran-toerana ny foibem-pitantanana sy politika eto amin'ny firenena, saingy afaka miaro ny firenena izany. Tadidio fa mampidi-doza ity drafitra ity ary toa ny fahafatesan'i Jakarta.
Tsy milentika fotsiny i Jakarta, fa misy ivon-tanàna hafa koa. Manerana an'izao tontolo izao dia misy tanàna amoron-tsiraka izay marefo indrindra amin'ny olan'ny haavon'ny ranomasina sy ny fiovan'ny toetrandro. Tanàna manomboka amin'ny Venise sy Shanghai, hatrany New Orleans sy Bangkok. Atahorana hilentika ireo tanàna rehetra ireo, saingy marihana fa tsy nanao zavatra firy i Jakarta mba hamahana izany olana izany.
Aza adino fa ny fiovaovan'ny toetrandro dia tsy mampisondrotra ny haavon'ny ranomasina fotsiny, fa koa ny fahamaroan'ny tafio-drivotra tropikaly izay miteraka loza lehibe any amin'ireo tanàna amorontsiraka.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny panorama rendrika ao Jakarta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fiovan'ny toe-trandro » Milentika i Jakarta